जीवनमा सफलताको मूल मन्त्र – Chitwan Post
अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिवक्ता एवम् मानवतावादी शान्तिदूत प्रेम रावतले यस्तो परिस्थितिमा पनि निरन्तर आफ्नो सन्देश मानिसहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । उहाँको सम्बोधनबाट साभार गरिएको केही अंशः
परिस्थिति राम्रो होओस् या नराम्रो तर त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईंको व्यवहार कस्तो प्रकारको हुन्छ ? कसरी तपाईं त्यो परिस्थितिलाई सम्हाल्नुहुन्छ ? किनभने, कतिपय मानिसहरू चिन्ता गरिरहन्छन् तर चिन्ता गरेर केही हुनेवाला छैन । वास्तवमा यो परिस्थितिबाट पार हुनका लागि तपाईंलाई जुन शक्तिको आवश्यकता पर्छ त्यो तपाईंभित्र नै छ । त्यसको श्रोत कोही अरू व्यक्ति नभएर तपाईं स्वयम् नै हुनुहुन्छ । तर, त्यसका लागि तपाईंले आफूतर्फ मोडिएर नियाल्नुपर्नेछ, अरूतर्फ होइन । हामी अरूलाई हेरेर के सोच्न थाल्छौँ भने– “ती मानिसहरूले मेरा बारेमा के भनिरहेका होलान् !”
यदि कसैले तपाईंका बारेमा सोच्नुपर्छ भने त्यो व्यक्ति स्वयम् तपाईं नै हुनुहुन्छ । अरू कोही हुन सक्दैन । तपाईं आफ्ना बारेमा के सोचिरहनुभएको छ ? तपाईं आपैmँसँग खुशी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ! तपाईं बिहानै उठेर आफ्ना बारेमा यही सोच्नुहुन्छ– मेरो आजको दिन राम्रोसँग बितोस् या अरूको चिन्ता गर्नुहुन्छ ? वास्तवमा जो कोही पनि व्यक्ति आपूmबाट टाढा जान त सक्छ तर उसलाई आफ्नो निकटमा कसरी आउने भन्ने बारेमा थाहा हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा ऊ त हराइरहनेछ । मानिसको अहिलेको अवस्था ठीक त्यस्तै छ । मानिस यो संसारमा हराइरहेको छ । उसलाई आपूmतर्पm फर्केर कसरी आउने भन्ने कुराका बारेमा ज्ञात छैन ।
तपाईंसँग सबैथोक छ तर तपाईंलाई त्यो कहाँ छ भन्ने नै थाहा छैन ! जुन शान्तिको तपाईंलाई खोजी छ त्यो त तपाईंसँग पहिलादेखि नै छ । यद्यपि मानिसहरू यो कुरालाई स्वीकार नगरिकन शान्तिको खोजीमा तल्लीन हुन्छन् । अनि सोच्छन्, “के गरेर मलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ होला ?” तर, जुन शान्तिको तपाईंलाई खोजी छ, त्यो शान्ति त तपाईंभित्रै छ । केवल त्यसलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ ।
जीवनलाई सफल पार्ने हो भने यसलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । यो जीवन तपाईंको हो । अरू कसैको प्रतीक्षा नगर्नुहोस् । यो संसार बदलियोस् या नबदलियोस् तर तपाईं त परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ नि ! जुन दिन तपाईं परिवर्तन हुन सुरू गर्नुहुनेछ, संसार पनि परिवर्तन हुनेछ । यो संसारमा खराबी पनि छ र राम्रा कुरा पनि धेरै छन् । मात्र आपूmभित्रको राम्रोपनालाई बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ ।
कतिपय कुराहरू तपाईंलाई मन पर्दैनन् । जुन कुरा तपाईंको रुचि विपरीतको हुन्छ, जुन चीजसँग तपाईंलाई घृणा उत्पन्न हुन्छ त्यो चीजका पछि किन लागिरहनुहुन्छ ? त्यसबाट अर्कोतिर मोडिनुहोस् । जब तपाईं त्यसको विपरीत दिशातर्पm मोडिनुहुन्छ तबमात्रै तपाईं त्यो चीजबाट बाहिर निस्कन पाउनुहुन्छ । यही कुरालाई मानिसहरूले भुल्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ– यस्तो ग¥यौँ भने त काम बिग्रन्छ ।
बिग्रँदैन किनकि जुन सहानुभूति तपाईंलाई चाहिएको छ, त्यो तपाईंभित्रै छ । जुन शान्ति तपाईंलाई चाहिएको छ त्यो पनि तपाईंभित्रै छ । धैर्यता पनि तपाईंभित्रै छ । अनि, तपाईंलाई रक्षा गर्नेवाला पनि भित्रै छन् । ठीक यसैगरी– जुन आनन्दको तपाईंलाई खोजी छ, जुन सुखको तपाईंलाई आवश्यकता छ– ती सबै कुरा तपाईंभित्र नै छन् । डराएर केही पनि हुने छैन । चाहे जस्तोसुकै कठिनाइ तपाईंको जीवनमा आओस् तपाईंभित्र त्यो शक्ति हुन्छ । तपाईंभित्र त्यो हौसला पनि हुन्छ र तपाईं त्यो कठिनाइसँग जुध्न पनि सक्नुहुन्छ ।
एउटा उदाहरण छ । एकजना मानिस बजारमा घुमिरहेका थिए । उनको नजर एउटा एकदमै राम्रो दोकानतिर प¥यो ।
उनले यति राम्रो पसल कहिल्यै देखेका थिएनन् ।
उनले सोचे, यो बाहिरबाटै यति धेरै राम्रो छ भने भित्रबाट त झनै कति राम्रो होला ! त्यसभित्र गएर हेरे । त्यहाँ ठूला–ठूला पिलर राखिएका थिए । राम्रा–राम्रा वस्तुहरूको साजसज्जा थियो । उनले आजसम्म यस्तो कहिल्यै देखेका पनि थिएनन् ।
यत्तिकैमा पसले आएर उनलाई सोधे– “म तपाईंलाई के सेवा गर्न सक्छु होला ?”
उनले पसलेसँग सोधे– “यति धेरै राम्रा चीजहरूलाई यहाँ सजाएर राखिएका छन्, यी के–के हुन् ?”
पसलेले एउटा चीजतिर इसारा गर्दै भने– “यो आनन्द हो !”
उनले सोधे– “आनन्द ! यो त एकदमै राम्रो छ !”
पसलेले अर्कोतर्पm इसारा गर्दै भने– “यो विवेक हो ! यो स्पष्टता हो ! यो भक्ति हो !” यस्ता चीजहरू उनले यसअघि आफ्नो जीवनमा
कहिल्यै देख्न पाएका थिएनन् ।
उनले सोधे, “के यसलाई किनेर लैजान पनि मिल्छ त ?”
पसलेले भने, “हजुर ! यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ ।”
उनले भने, “म यी सबै चीजहरू मेरो परिवार, मेरा आमा–बुवा अनि मेरा साथीभाइहरूका लागि पनि किन्न चाहन्छु ! कृपया तपाईं मलाई
स्पष्टता, आनन्द, दया यी सबै चीजको १६–१६ वटा प्याकेट बनाइदिनुहोस् ।”
पसलेले भने, “तपाईं एकैछिन पर्खनुहोस्, म अलिपछि लिएर आउनेछु ।”
केहीबेरपछि उनले आफ्नो हातमा एउटा सानो बट्टा लिएर आए अनि भने, “यो लिनुहोस्, तपाईंको सामान !”
उनी अचम्मित हुँदै पसलेसँग सोध्छन्, “यी चीजहरू यति सानो बट्टामा छन् ?”
पसले भन्छन्, “हजुर ! अवश्य पनि ! तपाईंले १६–१६ प्याकेट भन्नुभएको थियो । सोही हिसाबमा तयार पारेको छु । अब तपाईं यसलाई लैजान सक्नुहुन्छ !”
उनले भने, “यो कसरी हुन सक्छ ? यी त यति धेरै ठूला–ठूला चीजहरू देखिन्छन् । यो बट्टा त एकदमै सानो छ ! यिनलाई यसमा कसरी राख्न मिल्यो र ?”
त्यसपछि पसलेले उनलाई बुझाउँदै भन्छन्, “जुन चीजहरू तपाईं देखिरहनुभएको छ । म त यिनको बीउ मात्र दिने गर्छु । यी बीउहरूलाई तपाईं लगेर रोप्नुहोस्, यिनको हेरचाह गर्नुहोस् ! यिनीहरू ठूला भएपछि बल्ल तपाईंले यिनको फल पाउनुहुनेछ ।”
तपाईंको जीवनमा पनि सबैभन्दा मह¤वपूर्ण कुराहरू एउटा–एउटा बीउका रूपमा नै प्राप्त हुन्छन् । ठूला–ठूला कुराहरू जसलाई आनन्द, दया, स्पष्टता, भावना, प्रेम भनिन्छ ! यी सबै बीउका रूपमा नै प्राप्त हुन्छन् । यिनलाई रोप्नुपर्छ । यिनलाई पानी दिनुपर्छ, यिनको हेरचाह गर्नुपर्छ । त्यसपछिमात्रै तपाईंले चाहनुभएको स्वरूपमा ती चीजहरू बदलिन्छन् । अज्ञानताको बीउ हुँदैन तर ज्ञानको बीउ हुन्छ ।
घृणाको बीउ हुँदैन तर प्रेमको बीउ हुन्छ । घृणाको बीउको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यो आफसे आफ हुन्छ । क्रोधको बीउ हुँदैन तर दयाको बीउ हुन्छ । त्यसलाई रोप्नुपर्छ ।
यो पृथ्वी नै हो ती सृष्टिकर्ताको पसल ! अनि, तपाईंलाई तपाईंकै हृदयभित्र एउटा सानो बट्टा प्राप्त भएको छ ! ती बट्टामा ती राम्रा–राम्रा बीउहरू छन् ! जबसम्म तपाईं ती बीउहरूलाई रोप्नुहुन्न, तिनको हेरचाह गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईंका असल गुणहरूको फल फल्नेछैनन् ।
यदि ती चीजहरू फलेनन् भने त तपाईंको जमिन, जसलाई तपाईं आफ्नो ‘जीवन’ भन्नुहुन्छ । त्यो नै बाँझो हुनेछ । किनभने, त्यो जमिनमा केही न केही त उम्रनेछ । त्यही नै उम्रनेछ जे तपाईंले रोप्नुभएको छ या त त्यो उम्रेला जुन तपाईं चाहनुहुन्न । यदि तपाईंको खेतमा तपाईंले नचाहेको चीज उम्रिरहेको छ भने यसको अर्थ तपाईंले आपूmले चाहेको चीज रोप्नुभएको छैन । आफ्नो जीवनमा प्रेम, दया अनि सद्भावको बीउ रोप्नुहोस् । तिनलाई मलजल गर्नुहोस् । अनि, तपाईंको चाहनाविपरीतको चीजलाई उखेल्नुहोस् र तपाईंको चाहनाअनुसारको चीजलाई रोप्नुहोस् ।
प्रेम रावत ५२ वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै सारा संसारमा मानवता एवम् शान्तिका विषयमा सन्देश प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । उहाँलाई यस कार्यका लागि थुप्रै संस्थाहरूद्वारा शान्तिदूतको उपाधि पनि प्रदान गरिएको छ ।
आफ्नो सन्देशको चर्चाका अतिरिक्त उहाँले “द प्रेम रावत फाउन्डेसन” नामक एउटा परोपकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यस संस्थाका थुप्रै कार्यक्रमहरूमध्ये “जनभोजन” पनि एक हो । यसबाहेक यस संस्थाले यस्तो विपत्तिमा पनि विपन्न मानिसहरूलाई राहतको सामग्री बाँड्ने कार्य गरिरहेको छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि [email protected] र प्रतिक्रियाका लागि www.premrawat.com लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।